मनोज गजुरेलको जन्मदिनमा पूर्वपत्नी मीनाले ‘डियर एक्स’ भन्दै लेखिन् ‘तिमी दुनियाँको लागि हात्ति होलाउ ! तर मेरो लागि झिंगा होउ !’
May 12, 2020 2429
हास्यकलाकार म’नोज गजुरेलको जन्मदिनमा उनकी पूर्वपत्नी मीना ढकालले पनि व्यंग्यात्मक शुभकामना दिएकी छन् । केही वर्ष अघि सम्बन्ध विच्छे’द गरेकी मीनाले सोमबार पूर्वपति म’नोजलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएकी हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेस’बुकमार्फत शुभकामना दिएकी उनले मनोजको विवाहको पनि कामना गरेकी छन् ।
साथै उनले बाँकी जीवन रंगिन बनो’स् भनेर पनि मनोजलाई शुभकामना दिएकी छन् । फेसबुकमार्फत मनोजलाई शुभकामना दिएकी मीनाकै शब्दमा :
डियर एक्स, आज तिम्रो जन्मदिन परेको कुरा तिमिलाइ गुरु मान्ने तिम्रो ताप्लेजुङे छिमे’की भाइ मार्फत यश संजाल:को भित्तामा देखे। ???? जन्मदिनको सम्पुर्ण शुभकामना तिमिलाइ ????
यसै अबसरमा केही कुरा नलेख्दा’ फेरि हाम्रा शुभचिन्तकलाई मैले तिमिलाई सम्झेको भन्दै गलत अ’र्थ लाग्ने भएकोले केही लेख्नै पर्ने मेरो पनि बाध्यता हेरन‘।। हुनत तिमी दुनियाँको लागि’ हात्ति होलाउ ! तर मेरो लागि झिंगा होउ !
भनिन्छ नि झिंगा’को श्राप’ले डिंगा मर्दैन‘।। म हो त्यही डिंगा हु ! तिमिले मलाई सडकमा देख्न चाहेको तिम्रा मनोकांक्षा पूरा होलान नहोलान।। तिम्रा प्रार्थना भाकल केके जातिको सुनुवा’इ होला नहोला !! तर म सडकको ब्यक्ति’लाई महलमा पुर्याउन सक्ने गुण,क्षमता, सामर्थ्य भएकी एक अदभूत नारी हु भन्ने कुरा तिमि’लाई भन्दा सायदैलाई थाहा होला।
हामी कागजी कानूनी रुपमा छुट्टिनु भन्दा केही दिन पहिले तिमिले मेरो सामु आयेर भने’को रहेछौ ! कि त्यो पनि करिब २२ बर्षको जीवनकालमा पहिलोपटक मिठो बोलेर।। मलाई’ माफ गर ! मैले तिम्रा लागि जिबनमा केही गर्न सकिन ! अब आफ्नो लागि आफै गर तिमिले धेरै गर्न सक्छौ ! तिमिप्रती मेरो कुनै चित्त दुखा’इ रि स राग इगो छैन ! अरु पनि केके भन्दै ! भावु’क भएउ या नाटक गरेउ !
तर मलाई ती शब्दले कतै पगालेन र भावु’क पनि बनाएन ! त्यो चै मेरो किन भनेर मेरो ‘मनलाइ मात्रै थाह छ। ल त्यहा सम्म त माफ नै गरिदिन्थे कि ! तर त्यस्पछी, सम्बन्ध बिच्छे’द पछि छोरो र मेरा घरपरिवार अनि नजिकका तिम्रा साथी मार्फत जुन जुन हर्कत गर्दै फेरि पनि गल्ती र अ प रा ध गरेउ नि !
त्यस्पछी त झन मलाइ तिमी प्रती’ अलि अलि भको दया र सहानुभूति पनि म रे र गयो‘। खैर जे होस सधैको बर्ष जस्तै यो साल पनि‘। जीवनमा अझै धेरै उन्नती प्रगती अनि मैले भन्दा ठूलो महल बनाइ दिने जिबन साथिको प्रबेस होस ! तिम्रो बा’कि रहेको खुसीले तिम्रो जीवन रगिंन बनाओस।। जन्मदिनको फेरि पनि असिम शुभकामना ??? (भुलचुक लिनेदिने)
हेर्नुहोस् उनले फेस बुकमा हालेको पोस्ट…
Prevको हुन् सामाजिक संजालमा भाइरल भएकी यी बडीबिल्डर सुन्दरी ? हेर्नुहोस्
Nextआमालाई आफ्नै छोराले जि’उँदै गाडिदिए, ३ दिन पछि गरियो यसरी जीवि:तै’ उद्धा’र (भिडियो)
‘स्वेताको बिहेमा स्व.श्रीकृष्ण आउन मिल्ने भए यसो भन्थे होला’ भन्दै नाजिर हुसेनले लेखे मनछुने पत्र